Dagaaladii Itoobiya oo xaalad cusub galay | KEYDMEDIA ONLINE
Dagaaladii Itoobiya oo xaalad cusub galay
Waxaa sii xoogeysanaya dagaalladii udhaxeeyay Jabhaddii Tigreega iyo Ciidamada Federaalka dowladda Itoobiya.
ADISABABA, Itoobiya - Waxaa sii xoogeystay dagaalladii ka holcayay gobolka Tigreega ee ay maamuli jireen TPLF -ta waddanka Itoobiya, iyadoo dagaalladaasina ay galeen xaalad cusub.
Ciidamada TPLF ayaa markale la wareegay gacan ku haynta magaalada Mekelle ee caasimadda maamulka Tigrayga. Waxaana lagu soo warramayaa in ay sii xoogeysanayeen dagaalladaasi toddobaadyadii udambeeyay, iyadoo dhinaca kalena laga soo sheegayo xaalad bani'aadanimo oo aad u liidata.
Ciidamadii Federaalka Itoobiya ee halkaasi horey u joogey iyo kuwa cusub oo galinkii dambe ee shalay iyo saakay lagu sii daabulayay caasimadda ismaamulka Tigreega aya isaga baxeen magaalada, iyadoo maamulka kumeelgaadhka ah ee gobolka Tigraygu ay dalbadeen xabbad joojin.
Dhawaan ayey Qaramada Midoobay warbixin kasoo saartay xaaladda waddanka Itoobiya gaar ahaan gobolka ay dagaalladu ka socdeen, waxaa lagu sheegay warbixinta in ciidamo Eratariyaan ah ay qeyb ka ahaayeen dagaalada, taasoo sababtay in ciidamadii Eratariya ee qeybta ka ahaa duullaankii meesha looga saaray Jabhaddii TPLF ay isaga baxaan guud ahaan waddankaasi, iyadoo ay soo xoogeysteen kooxihii Jabhadda ahaa ee la dirirayay xulafada Abiy Axmed ee ka koobnaa saddexda waddan!
Madaxweynaha ku meelgaarka ah ee Gobolka Tigray Abraham Belay ayaa ku dhawaaqay xabbad joojin rasmi ah, sida ay baahisay wakaaladda wararka ee FANA iyo Warbaahinta dawladda federaalka Itoobiya.
Abraham Belay ayaa waxaa uu sheegay in xabbad joojintu dan u tahay shacabka gobolka Tigree -ga iyo danta guud ee dalka Itoobiya. Madaxweynaha Ismaamulka Tigreega Abraham iyo ciidamadii horay uga dagaallamayay gobolka oo ay kusoo biireen kuwo hor leh ayaa isaga baxay magaalada Mekelle ee caasimadda Ismaamulka.